नाकबाट रगत बग्ने समस्या भए के गर्ने ? यस्तो छ घरेलु विधि - Khabar Break | Khabar Break
नाकबाट रगत बग्ने समस्या भए के गर्ने ? यस्तो छ घरेलु विधि
– टाउको माथि गरेर चिसो पानीको धारा बनाएर खन्याउने । यसो गर्दा नाकबाट रगत बग्न बन्द हुन्छ।
– नाथ्री फुटेको बेला एउटा सफा कपडामा वर्फ राखेर केही समय नाकमा राखी छोड्ने । यसो गर्दा नाथ्री फुटेको निको हुन्छ।